May 29, 2022 N88LeaveaComment on तारा एयरको विमानमा धनुषाका एकै परिवारका सातजना रहेको पुष्टि
काठमाडाैं । आज बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमानमा धनुषाका एकै परिवारको सात जना रहेको पुष्टि भएको छ । पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको जहाज आज बिहानदेखि सम्पर्कविहीन छ । सो एयरका अनुसार उक्त विमानमा चालक दलका तीन सदस्यसहित २२ यात्रुहरू सवार रहेकामध्ये धनुषाको मिथिला नगरपालिका–११ लोटा गाउँका सात जना रहेको पुष्टि भएको छ […]
सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, कसकाे तलब कति ?
May 29, 2022 N88LeaveaComment on सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, कसकाे तलब कति ?
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको तलब साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले बढाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषणा गरेका हुन् । राजपत्रांकित तृतीय तहका कर्मचारीको तलब हाल ३९ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ छ । राजपत्रांकित […]
May 29, 2022 N88LeaveaComment on मिर्गाैला र क्यान्सरसहित यी राेग लागेकाहरूलाई सरकारले मासिक ५ हजार दिने
काठमाडौं । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीका लागि मासिक पाँच हजार दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ता बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताए । मिर्गौला […]
काठमाडौं । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९÷८० को बजेट संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गरे । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा […]
काठमाडाैं । सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन रु.पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । किसानलाई सहुलियत र सहुलियत कर्जा दिन यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्नेछ। किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू […]
काठमाडौँ। लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत स्थायी पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । चौथो तह प्राविधिकतर्फ आयोगले खुला तथा समावेशीतर्फ कूल २६६ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । ३०० रुपैयाँ दस्तुरसहित असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइन माध्यमबाट फारम भर्न सकिनेछ । हेर्नुस पूरा विज्ञापन ! […]